အခန်း ၃ - စွဲလမ်းဆေး၏အခြေအနေတွင်စိတ်ဖိစီးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာဗေဒ - အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးမှသည်အပြုအမူစွဲစွဲခြင်းအထိ (၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
အခန်းကြီး3- စွဲဆေးဝါးများ၏အခြေအနေတွင်စိတ်ဖိစီးမှု psychobiology: အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေအမူအကျင့်စှဲဖို့ (2016)
Volume ကို 223, 2016, စာမျက်နှာများ 43-62
စွဲဆေးပညာအတွက်အာရုံကြောသိပ္ပံ - ကာကွယ်ခြင်းမှပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအထိ - တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဆေးဝါးများ
ဤအခနျးတှငျကြှနျုပျတို့ခေတ္တစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏အခြေခံဇီဝဗေဒပြန်လည်သုံးသပ်။ ကျနော်တို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုစတင်ထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကစား၏ neurobiology, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် relapse တင်ပြသည်။ ဒီအတှကျအဆိုပြုထားယန္တရားများ, တဦးကိုလက်ပေါ်, ဇီဝဗေဒစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုပြုပြီနှင့် dopaminergic ဆုလာဘ်စနစ်နှင့်, အခြားလက်ပေါ်, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုပြုပြီနှင့်အဓိကစွဲ-related အပြုအမူတွေကိုစိစစ်အတွက်အရေးကြီးအခြားစနစ်များအကြားရှုပ်ထွေး interaction ကပါဝင်သည် ထိုကဲ့သို့သော endogenous opioids, ထိုစာနာ-adrenal-medullary စနစ်, နှင့် endocannabinoids အဖြစ်။ Genomics, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုက Moderator အဖြစ်လိင်နှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း (လောင်းကစားဝိုင်း, hypersexuality, အလုပ်မဖြစ်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်တစ်ဦးစွဲလမ်းပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်အစားအစာ) အပါအဝင်လေ့လာမှု၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုနည်းလမ်းကိုလည်းအကျဉ်းချုံး၏တစ်ဦးက Moderator အဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုဆက်စပ်အတွင်းတင်ပြကြသည် စွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်။
keywords စိတ်ဖိစီးမှု; စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုလမ်းကြောင်း; Relapse; စိတ်ခံစားမှု; စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေ; Hypothalamic-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုး; စာနာ-adrenal-medullary တုံ့ပြန်မှု; စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေ; cortisol
အဆိုပါစွဲလုပ်ငန်းစဉ်ပြင်ပဖိအားအမျိုးမျိုးကနဦးလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်, နာတာရှည်အသုံးပြုမှု, ဒါမှမဟုတ် relapse လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါနေစဉ်, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောကြောင့်ဆုတ်ခွာအတူထိခိုက်စေသူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်ဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံကိုများမှာ (Kassel et al ။ , 2007) .Use တုံ့ပြန် အနုတ်လက္ခဏာအလှည့်၌, နောက်ဆက်တွဲအသုံးပြုမှုဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲသည်မှန်လျှင်, နာတာရှည်အသုံးပြုမှုကိုတိုးပွါးသောအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်အတွက် (တစ်ဦးဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုများဖယ်ရှားရေး) ဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ အပြုသဘောအားကောင်းမြင့်မားဒါမှမဟုတ်စွဲလမ်းပစ္စည်းဥစ္စာ၏အသုံးပြုမှုကိုတုန့်ပြန်ကြုံတွေ့အပျော်အပါးကနေအဓိကအားထား
လက်ရှိ DSM5(American Psychiatric Association, 2014) ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပျော့ကနေပြင်းထန်နေတဲ့သဘာဝအစဉ်ဆက်တစ်လျှောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမှီခိုနှစ်ဦးစလုံးထည့်သွင်းရန်စွဲ၏အဓိပ္ပါယ်ပြန်လည်အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင်သိရသည်။ စကားတော် "စွဲ" နှင့် "မှီခို" သာ. ကျယ်ပြန့်သောဥစ်စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်၏မျက်နှာသာအတွက်ရှောင်ရှားနေကြသည်ဒီစနစ်သစ်အောက်မှာတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုများအတွက်ခြေစစ်ပွဲ
စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုနာတာရှည်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူကိုလူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ထင်ရှားသည့် neurophysiology ၏ထင်ဟပ်၏ dynamic neurophysiology, နညျးလမျးမြားစှာရှိကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ အပြုအမူအတွက်ဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စွဲရှယ်ယာအလားတူသောအပြောင်းအလဲနှစ်ဦးစလုံး HPA, LC-NE, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအလားတူ neurophysiological အပြောင်းအလဲများနှင့်ဥရောပဗဟိုဘဏ်စနစ်များ, နှင့်အလားတူအန္တရာယ် profile များကို (စသည်တို့ကိုလိင်, psychopathology,) ။ persistent ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများတွင်ဘုံများမှာအားလုံးသော, နာတာရှည်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားတွေအတွက်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုစိုးရိမ်စိတ်အတွက်တိုးစေပါတယ်, အကျိုးသက်ရောက်စေအနုတ်လက္ခဏာနှင့်အိပ်စက်ခြင်းအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အစာစားခြင်း (Chida နှင့် Hamer-, 2007 အာဒံနဲ့ Epel, 2006;; Akerstedt, 2008) ။ တူညီသောအာရုံစူးစိုက်မှု, အာရုံစူးစိုက်မှု, မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက်ပြတ်တောက်မှုအတွက်မှန် (et al Het ။ , 2005) ။ တစ်ဦး neurophysiological ရှုထောင့်ကနေအများအပြားဘုံလမ်းကြောင်းလည်းရှိပါတယ်။ နာတာရှည်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောမော်ဖင်းအကိုက် endogenous opioid လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပေါ်သို့မှီခိုဖြစ်ပေါ်လာ LC-NE လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်အပြောင်းအလဲမှဦးဆောင်အဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုနှစ်ဦးစလုံးအထက်ညွှန်ပြ (။ ။ Curtis et al, 2013 Chaijale et al, 2012) အဖြစ် ။ အဆိုပါနှိပ်စက်ပစ္စည်းဥစ္စာ၏ဓာတုဗေဒအပေါ်အခြေခံပြီးအချို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်လည်းမရှိသော်လည်းယေဘုယျအားစူးရှသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုလည်းအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု (al'Absi et al အဖြစ်အများကြီးအတူတူပင်လမ်း functioning တိုးလာ HPA နှင့် SNS စေပါတယ်, 2008; ။ Fox က et al ။ 2006; Hamidovic et al, 2010; ။ Mick et al, 2013) ။ ။
အများဆုံးပြင်းထန်သောသုတေသနအာရုံကိုလက်ခံရရှိကြောင်းတစ်ခုမှာဘုံလမ်းကြောင်းဦးနှောက်ထဲမှာ dopaminergic ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖြစ်ပါတယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအဖြစ်တာတူညီသောလမ်းအတွက် HPA, SNS နှင့် endogenous opioid စနစ်များ၏လှုပ်ရှားမှုအရှိန်မြင့်။ dopamine, NE နှင့် serotonin (Salamone နှင့်ကော်ရဲရား, 2013): အဆိုပါအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုများ, အလှည့်၌, catecholamines အပါအဝင်မျိုးစုံ neurobiological စနစ်များအားဖြင့်တည်းဖြတ်ထားပါသည်။ အဆိုပါ HPA နှင့် dopaminergic စနစ်များ (Boyson et al ။ , 2014) အလှနျမှီခိုဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် Dopamine မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏အကျိုးကိုဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, pharmacological လေ့လာမှုများစိတ်ဖိစီးမှု glucocorticoid အဲဒီ receptor activation (Boyson et al ။ , 2014) ကနေတဆင့် dopamine ထုတ်လုပ်မှုတိုးပွါးကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့်, ဗဟို CRF လှုပ်ရှားမှုတိုးလာ dopaminergic ဂီယာ (Marinelli, 2007) တွင်အရာ, အလှည့်အတွက်ရလဒ်တွေကို N-methyl-D-aspartate အဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှု potentiates တိုးတက်လာခဲ့သည်။ dopaminergic လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်အတွက် HPA activation ၏အခန်းကဏ္ဍကိုများအတွက်ပံ့ပိုးမှုနည်းစနစ်အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများအတွက်ထင်ရှားခဲ့ (Barrot et al, 2000; ။ Graf ၏ et al, 2013 ။ ) ။ ဒီသုတေသနမှတဆင့်ဝေဖန် CNS ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းများနှင့်အဆောက်အဦများအတွက် ventral tegmental ဧရိယာ, နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အပါအဝင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ (Baik, 2013; ။ Kringelbach et al, 2012; လောရင့်ခြင်းနှင့် Brooks, 2014) ။
အဆိုပါ dopaminergic ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအပြင်, အလွဲသုံးစားမှုနှစ်ဦးစလုံးစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအဆိုးဟာ raphe နျူကလိယ, striatum, နျူကလိယ accumbens နှင့်တစ်ခုလုံးကို neocortex ပါဝင်သည်ဟုအဆိုပါ serotonergic လမ်းကြောင်း impact ။ ပြောင်းလဲ serotonergic လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏သက်ရောက်မှုစိတ်ဓါတ်များ, မှတ်ဉာဏ်, အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုးအတွက်အပြောင်းအလဲများအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြသည်; နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြည်နယ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်ထင်ရှားသောအပေါငျးတို့သ (။ Kirby et al, 2011; Meerlo et al, 2008; ။ Meneses, 2013)
စိတ်ဖိစီးမှုအမျိုးမျိုးဇီဝကမ္မအမှတ်အသားများ relapse ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ဥပမာအားဖြင့်, relapse ၏ပထမဦးဆုံး 24 ဇစဉ်အတွင်းတစ် attenuation စာနာခြင်းနှင့် HPA စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုသရုပ်ပြတဲ့သူဆေးလိပ်သောက်4ရက်သတ္တပတ် postquit (al'Absi, 2006 မှာ relapse status ကိုတစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်ရှိသည် ဖြစ်. , ။ al'Absi et al, 2004, 2005; Ceballos နှင့် al'Absi, 2006) ကြီးထွားအနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ပါဘူးအဖြစ်
အလားတူပင်တဏှာသို့မဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲ-သွေးဆောင် relapse မြဲဆေးလိပ်သောက် (Ahmed ကနှင့် Koob, 2005) များအတွက်အစွမ်းထက်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်သည်။ ဒီအတွေ့အကြုံကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုဖြစ်သော်လည်းပြန်သွားကြသည်သူမြား၏ထင်ရသောအပြန်အလှန် attenuation တုံ့ပြန်မှုကအနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက် CRF (Erb, 2007) အား, related ခံရဖို့ပုံရသည်။
အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးအပြင်၌, နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွင်း catecholamines နဲ့အချိုမှုမူးယစ်ဆေးတွေကို, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုများကသွေးဆောင်နေကြ
ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်နီကိုတင်းစွဲလမ်းကို အသုံးပြု. ဤအပိုင်းကိုစတင်ခဲ့သော်လည်းဖိစီးမှုနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော cortisol တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းကင်း, opiates, အရက်, အမ်ဖီတမင်းနှင့်ဆေးခြောက် (Fox က et al အပါအဝင်အခြားတ္ထုများရပ်နားခြင်းကြိုးစားမှုနှင့်အတူပြန်သွားကြသည်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းထောက်ပြဖို့အရေးကြီးတယ် ။ , 2013; Hamidovic et al, 2010; ။ Higley et al, 2011; ။ Sinha, 2011) ။ ထိုကဲ့သို့သောဘိန်းဖြူအဖြစ်အချို့သောအလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများနှင့်အတူသို့သော် cortisol တုံ့ပြန်မှုအထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေး paraphernalia တွေကို (Fatseas et al ။ , 2011) မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်မဟုတ်ဘဲ attenuation ထက်မြင့်မားသောဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအလယ်ပိုင်းဆုလာဘ်များနှင့်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုစနစ်များအတွက်ဖြစ်ကောင်း dysregulation နှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက် HPA အပြောင်းအလဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဟာ HPA ဝင်ရိုး၏ dysregulation မှဆက်စပ်ကြောင်းပေါများသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိ, ၏ညှနျကွား၏
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါကြောင့်၎င်း၏ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစွဲလမ်းအပြုအမူပုံစံများ (Hasin et al ။ , 5) မှ 2013 အတွက် DSM 2013 မှထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ကျွန်တော်အထက်တွင်စောဒကတက်သကဲ့သို့, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုတစ် key ကိုစတင်အတွက်အချက်, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, စှဲများအတွက် relapse ဖြစ်ပါသည်, လျှင်, ကအားလုံးကိုအမူအကျင့်တို့တွင်အထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စွဲဆက်ဆံရေးသက်သေအထောက်အထားရှိသင့်ကြောင်းကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖို့မတ်တပ်ရပ်လို့စိတျပိုငျးဆိုငျရာ, လောင်းကစားဝိုင်းမှတိကျတဲ့စိတ်ဖိစီးမှု၏သိမြင်မှုနှင့်ဇီဝကမ္မ parameters တွေကို။ ဤရွေ့ကား, အကယ်စင်စစ်ဤ parameters တွေကိုအများအပြားများအတွက်အမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောကွာရှင်း, အိမ်ထောင်ရေးခိုက်ရန်နှင့်ကလေးဘဝကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့သမိုင်းအဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ၏နမူနာ (PGs) (က Black et al ။ , 2012) တွင်ပိုမိုပျံ့နှံ့နေသည်သိရသည်။ ကုသမှု၏အချိန်မှာပိုမိုမြင့်မားသောဘဝစိတ်ဖိစီးမှုအင်အားအကောင်းဆုံး4လအတွင်း posttreatment (Gomes နှင့် Pascual- Leone, 2014) မှာ PG relapse ခန့်မှန်းထားသည်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြေခံ cortisol လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူမွှငျ့တငျမရနိုင်ပေမဲ့
ရောဂါ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနဲ့ Cortisol ၏အရှည်နှင့်အတူနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှု, စုစုပေါင်းလောင်းကစားဝိုင်းကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူကျော်ဒုက္ခဆင်းရဲ (Geisel et al ။ , 2015) ရှိပါတယ်။ ထို့ပြင်လောင်းကစားဝိုင်း-related အပြုအမူတွေကိုဖိအားအမျိုးအစားအားလုံးကို (Steinberg et al ။ , 2011) နဲ့တစ်ဦးစိတ်ဖိစီးမှုပြည်နယ်၏စမ်းသပ် induction နှင့်အတူသော်လည်းမရတိုးမြှင့်။ အစောပိုင်းသုတေသနပြုစိတ်ဖိစီးမှုဇီဝြဖစ်စဉ်သည် HPA, စာနာ, serotonergic, dopaminergic နှင့် endogenous opioid စနစ်များဖြင့်တိုင်းတာသည်အတိုင်း, လောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူတွေ, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် relapse (Blanchard ဖြစ်ပြီး et al ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ကွောငျးဖျောပွသ, 2000; ။ ကမ့်ဘဲလ်-Meiklejohn et al ။ 2011; ဗန်တွင်း Bos et al, 2009) ။ ။ PGs အဘို့, Basal ပျံ့နှံ့နေတဲ့ NE, EPI နှင့် dopamine တိုးမြှင်နှင့်လောင်းကစားများ၏လုပ်ရပ်တစ်ခု arousal ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်နေကြသည် (Meyer et al ။ , 2004) ။ Basal အဆင့်ဆင့်သို့မဟုတ်လောင်းကစားအပြုအမူတွေမတူဘဲ, လောင်းကစားဝိုင်းတွေကိုရန် cortisol တုံ့ပြန်မှု PGs သော်လည်းမအပန်းဖြေလောင်းကစားသမားတွေအဘို့ပျက်ကွက်ဖြစ်နိုင်သည်
(ပဲရစ် et al ။ , 2010a, ခ) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုများအရက်စွဲကဲ့သို့ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် anterior cingulate, ventral striatum နှင့် prefrontal cortical အတွက်မူမမှန်နှင့်ဆက်စပ်သည်, ထိုညွှန်ပြ (Koehler et al ။ , 2013) ။ စွဲလမ်းစေအရည်အသွေးတွေကို (persistent နှင့်အလုပ်မဖြစ်အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ဆေးခန်းသိသာထင်ရှားသောချို့ယွင်းသို့မဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲမှဦးဆောင်အပြုအမူ) နဲ့အခြားအပြုအမူတွေ hypersexuality, အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းကိုရောဂါနှင့် disorders အလွန်အကျွံစား noneating (AKA "အစာစွဲလမ်း") တို့ပါဝင်သည်။ ထိုအသီးအသီးအသေးတစ်ဦးဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါအဖြစ် DSM5အတွက်ပါဝင်၏အဆင့်အထိထမြောက်တော်မမူခဲ့ကြပေမယ့်အဲဒီတစ်ဦးချင်းစီကမောက်ကမဖြစ်မှုမှဦးဆောင်အသုံးပြုမှုဘုံတစ်ခုမြင့်တက်ပုံစံရှိသောသူအချို့အသိအမှတ်ပြုမှုလည်းမရှိ။ ထို့ပြင်အစောပိုင်းသက်သေအထောက်အထားသည်ဤအလားအလာကိုအမူအကျင့်စွဲလမ်း (ဆီကလိင်စွဲလမ်းနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုရောဂါ) နှင့် dopamine, Self-အစီရင်ခံစိတ်ဖိစီးမှု, သို့မဟုတ် HPA ဝင်ရိုး dysregulation အကြား link တစ်ခု၏တည်ရှိ (အယ်လ်တတ်ကြ၏ et, 2015; ။ Hou et al, 2012 ။ ) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ anorexia သို့မဟုတ် bulimia ၏ရိုးရာစားမမှန်ကနေကွဲပြားသော "အစာစွဲ" သို့မဟုတ် "အစာစားခြင်းစွဲလမ်း" (ရော်ဂျာနှင့် Smit, 2000) တည်ရှိရှိပါတယ်ဖြစ်စေမအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဆွေးနွေးငြင်းခုံသည်လက်ရှိတွင်လည်းမရှိ။ နေဆဲအတော်လေးအငြင်းပွားစရာဖြစ်သော်လည်းအခြားအစာစားခြင်းမမှန်ခြင်းမှယင်း၏ဂုဏ်ထူးအထောက်အထား supporting အဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် dopaminergic ဆုလာဘ်စနစ်က၎င်း၏အားနည်းချက်တစ်ခုအစားအသောက်စွဲလမ်း point ရဲ့အယူအဆကိုထောကျပံ့သောသူတို့အား (; Volkow et al, 2007 အာဒံနဲ့ Epel, 2013 ။ ) ။